Semalt: Abavakalisi beeNgcaciso zeSayithi kunye nendlela yokusebenzisana nabo?
Bonke abaphathi bewebhu basebenzisa i-Google Analytics ukulandelela abavakalisi bewebhusayithi. U-Ivan Konovalov, u-10 (Semalt uMphathi weNtuthuko yabaThengi, uthi xa ubona i-spikes ekutyelele kwi-akhawunti yakho ye-Google Analytics, amathuba okuba u-spam othungayo ushaye indawo yakho. IiWebhsayithi ezintsha kunye neeblogi zifumana ukususela kuma-50 ukuya ku-100 ukutyelelwa ngosuku, kwaye ukuba izibalo zibonisa ukutyelela okungaphezu kwama-200 kwiintsuku ezithile ngaphandle kwe-SEO efanelekileyo, kufuneka uqaphele ingxaki kwaye uzame ukufumana isisombululo sayo.
Ingcamango yakho yokuqala iya kuba "isithuthi sam sikhula ngokukhawuleza." Xa ukhangela kuloo manani, uya kufumana ukuba i-spam yokudlulisa idala umonakalo kwisayithi lakho ngokuzenzekelayo.
Uninzi lwamawebhusayithi kunye neeblogi zifumana ukukhangela kwi-search engokwemvelo kunye namajelo eendaba ezentlalo. Abanye be-webmasters bakhetha ukuthunyelwa, kwaye iinqununu zeziza ezichongiweyo zifumaneka kwiCandelo leziteshi ze-akhawunti ye-Google Analytics. Ukuba uhlala uqaphela, uya kuba nolwazi lokuba ukuhanjiswa kuya kunyuka imihla ngemihla kwaye ukunyuka okudlulisiweyo akulungele indawo yakho. Ukuba unxibelelwano oluvela kwiiwebhusayithi eziphantsi okanye ezindala zibonisa ukuba iwebhusayithi yakho isengozini. Kwabanye, ukuhanjiswa okwandisiweyo yinto entle, kodwa akunjalo.
Ngubani odibana newebhusayithi yam?
Yiya kwicandelo lokudlulisela ukuba ufumane inani lamasayithi athumele ukuthunyelwa kwendlela yokuthunyelwa kweentsuku. Mhlawumbi ubone i-free-buttons.com.com, i-darodar.com, i-4webmasters.org, kunye ne-sanjosestartups.com kule ndawo. Ukuba uGoogle ngala mawebhsayithi, uya kufumana ukuba ngaba baxhamli be-spammers kwaye baqhubeka bethumela i-fake traffic cishe nsuku zonke. Kuthetha ukuba izithuthi ezivela kule mihlaba yokuhanjiswa ayikho into engaphezu kwakho intlungu.
Ugaxekile logalelo luyisicelo sokungabikho esithunyelwe kwisiza sakho ngesikripthi esithintela ukuthumela i-HTTP yakho. Umsebenzisi we-HTTP uyingcezu yolwazi oludlulileyo ngumkhangeli-mva xa usuka kwiwebhsayithi enye ukuya kwelinye. Iintlobo ezingenanto ziya kubeka i-HTTP yakho kubhendi kwiwebhsayithi ebezijolise ekukhuthazeni kwi-intanethi. Ukuba unenkxalabo malunga nenani lokushaya isayithi lakho elifumanayo okanye ukuchofoza kwezo zixhumanisi, akufanele uvakashele iiwebhusayithi zazo.
Kutheni i-spam yokudlulisa iingozi?
Ezinye iWebhsayithi zipapasha ii-logs zokudlulisa kwaye zigxininise kwezinye izinto ezixhamlayo kwi-spammers. Xa idatha ishicilelwe kwi-intanethi, abagaxekile bafumana ukuphucula kumaphepha abo ewebhu. Kubukeka ngathi injini yokukhangela iyakhawula iiwebhusayithi okanye amablogi abo ngokulula, ziqwalasela ngokusemthethweni. I-spam yokudlulisa ingozi ngenxa yezi zizathu zilandelayo:
Iyakwenza i-akhawunti yakho ye-Google Analytics, kwaye inani lokutyelela lihlala lihluthwe;
Yenza kube nzima ngathi ukuba sihlole ukuba bangaphi iindwendwe ezithandekayo kwiziko lethu;
Ukwandisa izinga lokuhlawula kwi-100%, kwaye ixesha leseshoni lihlala li-0: 00;
I-Google kunye nezinye iinjongo zokukhangela ziyazi ezi zinto kwaye ziyakunqumla isimo sakho kwisayithi kwiintsuku ezizayo. Kungenxa yoko ukutyelela i-spam ukutyelela kuluhlu oluthile kwi-webmasters. Kufuneka uthathe amanyathelo angxamisekileyo kwiiwebhsayithi ezixhasayo ngaphambi kokuba ziphelile kwaye ishishini lakho lichithwe kwi-intanethi Source .